Shiinaha 1000mm Hot Rolled HRC Steel Coil ee warshadda baabuurta iyo soo saarayaasha |Zhanzhi
Gariiradda birta duuban ee kulul ee HRC waa nooc ka mid ah gariiradda birta oo ballaciisu ka weyn yahay ama la mid yahay 600mm dhumucdiisuna tahay 1.2-25mm.Gariiradda birta duuban ee kulul waxay ka sameysan tahay saleeb (badanaa jilibka tuurista joogtada ah) oo ah walxo ceeriin ah, kaas oo lagu kululeeyo oo lagu sameeyo warshad wax lagu shubo iyo wax lagu dhameeyo.
2. Dhumucdiisuna: 1.2-16mm, customized
3.Width: 1000-2500mm, customized
Marka loo eego agabkooda iyo agabkooda kala duwan, waxa loo qaybin karaa birta qaab dhismeedka kaarboonka caadiga ah, birta daawaha hoose iyo birta daawaha.
Marka loo eego codsiyadooda kala duwan, gariiradda birta duuban ee kulul ayaa loo qaybin karaa birta samaynta qabow, birta qaab dhismeedka, birta qaab dhismeedka baabuurta, birta qaab dhismeedka u adkaysta daxalka, birta qaab dhismeedka farsamada, dhululubada gaaska welded iyo weelka cadaadiska birta, birta dhuumaha, iwm.
Darajo Heerka U dhigma
HEERKA & DARAJADA Codsiga
GBT3274 JIS G3101, SS330, SPHC, SPHD Qaybaha qaab dhismeedka
Alaabooyinka birta duuban ee kulul waxay leeyihiin sifooyin aad u wanaagsan sida xoog sare, adkeysi wanaagsan, habayn sahlan iyo samaynta iyo alxanka wanaagsan, iwm.
Farqiga u dhexeeya gariiradda birta duuban ee kulul iyo birta duuban ee qabow:
Gariiradda birta duuban ee kulul waa badeeco la farsameeyay ka hor inta aan billet dib loo dhigin.Gariiradda birta duuban ee qabow waa habaynta dambe ee gariiradda birta duuban ee kulul.Miisaanka guud ee gariiradda birta waa qiyaastii 15-30t.Guud ahaan, dhumucdiisu waxay ka sareysaa 1.8mm.
Sababtoo ah gariiradda birta duuban ee kulul waxay leedahay sifooyin aad u fiican sida xoog sare, adkeysi wanaagsan, habayn sahlan iyo alxan wanaagsan, sidaas darteed gariiradda birta duuban ee kulul ayaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha wax soo saarka sida maraakiibta, baabuurta, buundooyinka, dhismayaasha, mashiinada iyo weelasha cadaadiska iyo wax soo saarka kale. warshadaha.Iyada oo ay sii kordheyso qaan-gaadhnimada tignoolajiyada cusub ee xakamaynta sida saxnaanta cabbirka, qaabka iyo tayada dusha sare ee gariiradda birta duuban ee kulul iyo soo bixitaanka joogtada ah ee alaabada cusub, alaabada birta duuban ee kulul ayaa si weyn loo adeegsaday waxayna noqdeen kuwo aad iyo aad ugu tartamaya suuqa.